Mhinduro kune boot matambudziko muUbuntu neLinux Mint | Linux Vakapindwa muropa
Mhinduro kune boot matambudziko muUbuntu neLinux Mint
Mune ino pfupi dzidziso isu tichaenda kukubatsira iwe kugadzirisa akawanda Ubuntu uye Linux Mint bhutsu matambudziko nekungoita mirairo miviri
Kunyangwe izvi zvinhu zvisiri zvakajairika muLinux anoshanda masisitimu, matambudziko ebhutsu achiripo muUbuntu anoshanda masystem uye Ubuntu-based anoshanda masystem seyakakurumbira Linux Mint.
Dambudziko rakanyanya kujairika rinowanzoenderana nemamwe matambudziko ane chekuita nechikamu chakamisikidzwa yedu yekushandisa. Dambudziko iro inoita iyo yekushandisa sisitimu isingakwanise kubhuroka zvakajairika uye kuti muzviitiko zvakawanda, tinotenda kuti tinoda kumisikidza komputa yedu. Neraki, matambudziko ekutanga ane mhinduro
Chinhu chekutanga chatichaita kugadzirisa matambudziko ekutanga kubhuya iyo inoshanda sisitimu kuburikidza neCD mhenyu. Kamwe isu patinopinda mukati, isu tichaenda kunomhanyisa terminal uye kumhanya iyo fdisk yekushandisa nemirairo inotevera.
Uyu murairo unoratidza zvese zvikamu zvatinazvo pane edu akaomarara dhiraivha uyezve Ichatiratidza chikamu icho chatine system yekushandisa.
Kazhinji, inoiswa mu sda1 chikamu, ndiko kuti, pachikamu chekutanga cheiyo hard disk iyo inoita sa tenzi.
Kugadzirisa dambudziko rebhoti, tiri kuzoshandisa iyo fsck raira, chinova chirongwa chinoona zvikanganiso zvese uye nekuzvigadzirisa otomatiki. Kuti timhanye pane yedu yekutanga chikamu, isu ticha mhanyisa uyu murairo.
Chinhu chakajairika mune idzi kesi ndechekuti iwe paunotangidza komputa uye bhuti zvakajairika, zvese zvakatodzokera zvakajairwa uye iyo yekushandisa system bhutsu zvakajairwa.
Kana isiri kushanda nemazvo, zvinogona kudaro kuti matambudziko aive Hardware, iyo iri chokwadi yakaipa nhau kune rako hard drive.
Zvirinani iyi dzidziso inokwanisa kugadzirisa matambudziko mazhinji ebhutsu ane chekuita nesoftware matambudziko, senge kumisikidzwa kwakashata kwekuvandudzwa kana matambudziko ehurongwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Mhinduro kune boot matambudziko muUbuntu neLinux Mint
Just nhasi ndaifanirwa fomati asi mune yangu yaive nekuti iro mushandisi password haina kuzivikanwa usati wapinda mudesktop. Zvakaitika kwandiri kanoverengeka uye nanhasi handizive kuzviita sei. Chero ruzivo rweizvi?
Nenzira, ini ndinoshandisa chete kuburikidza neLiveUSB.
Pindura kuna Perver
Fabricio Ku akadaro
Ndakaedza nzira dzakakurumbira dzekugona kutanga Ubuntu uye panguva imwechete ndiine imwe isiri-Linux inoshanda sisitimu kudzamara ndawana foramu apo pakuisa Ubuntu ndaifanira kugadzira chikamu chandisingarangariri kuti ini ndakangozviona inoonekwa muUbuntu kana ichiiswa uye ichichengetwa ndinofanirwa kuchengeta iyo chikamu kuti ndikwanise kuisa imwe distro uye panguva imwechete iine imwe OS
Pindura kuna Fabricio Ku
Ini ndinowana ruzivo rwuri mubhuku rwakabatsira uye rwakareruka
Inonakidza iyo nyowani nyowani yemapeji kukwazisa azpe
Ini ndinoenda ku linux uye inosvika pamitsara, chii chandingaite?
Pindura kuna kenny-davila
Mhoroi, ini ndiri mutsva pano, kabhuku kakadimburwa uye bhuti rakatyoka, ndakaedza izvozvo asi hazvindibvumidze, zvinodaro iyi fdisk: haigone kuvhura / dev / loop0: Mvumo yaramba
fdisk: haigone kuvhura / dev / mmcblk0: Mvumo yakaramba
fdisk: haigone kuvhura / dev / sda: Chibvumirano chakarambwa
fdisk: haigone kuvhura / dev / sdb: Mvumo yakaramba
Uri kuimhanyisa neSUDO here?
fsck kubva ku-use-linux 2.34
e2fsck 1.45.5 (07-Ndira-2020)
fsck.ext2: Faira kana dhairekitori haripo uchiedza kuvhura / dev / sda1
Zvinoita here kuti chishandiso chisipo?
dambudziko nderei? ndinoigadzirisa sei?
Huila Magnificent akadaro
Ndinokutendai zvikuru, makandibatsira kuigadzirisa, yakanga yaitika kwandiri nekuda kwekudzimwa kwemagetsi.
Pindura Huila Magnifica
Linux yeZvose yakavakirwa paUbuntu 16.04 uye inowedzera Fluxbox uye Cairo-Dock
Zvikoro Linux 4.4: yakagadzirira kutorwa uye kuiswa